Imali itholakala kudlalwa iphinde ihambe kudlalwa - Bayede News
Isithombe: Goway Travel
Imibhikisho ye-ANCYL isiqubule inkombankombane eMkhandlwini
Sikhule kunemidlalo enhlobonhlobo, esemthethweni neminye eyayithathwa kancane nje, kodwa inamandla okujwayeza umuntu indlela ethile yokuphila noma yayinganambitheki kwabanye. Abanye bazosikhumbula isipini, lapho kwakudlalwa ngemali, iphonswe phezulu noma iphendulwe phansi, bese kulindelwa omunye osemdlalweni aqagele ukuthi yisiphi isithombe esibheke phezulu. Kwakungesilo ibhizinisi leli kodwa abanye babegcina benemali beyithola kuwo lo mdlalo. Abanye babeze bayintshontshe emakhaya imali ukuze babe yingxenye yalo mdlalo owawudlalwa wontanga. Uma sebethe ukukhula abanye babedlala eminye imidlalo ethe thuthu, enemali ethe xaxa. Eminye yale midlalo engiyikhumbulayo wumdlalo wedayisi nowamaphepha. Le midlalo yayingalawulwa muntu kodwa bakhona ababeyidlala bethathwa njengotsotsi. Wayengekho owayengazishaya isifuba athi ungumsunguli wespini noma wedayisi kumbe umnikazi wale midlalo.
Ngokuhamba kwesikhathi kuvele eminye imidlalo ethathwa njengethuthukile kunalona esengiwuchaze ngenhla. Imidlalo efuze lena esengiyibalile ngenhla yenziwa yaba semthethweni, kwashaywa imithetho elawula izindawo lapho izodlalwa khona, iminyaka yobudala yabantu abavunyelwe ukudlala neminye imigomo. Iningi lale midlalo yayizodlalelwa ezindaweni ezakhiwe. Angisho ukuthi kwayiqeda imidlalo edlalwa ngokungekho emthethweni. Engifisa ukukuveza lapha ngukuthi izinto esizithatha njengemidlalo ziguqulwa ngabathile zenziwe zibe yibhizinisi labathile. Kungaba kuhle sikhothoze kwezinye zezinto ezenziwa ngaboHlanga sibone lezo okungenziwa icebo lebhizinisi ngazo.
Eminyakeni eminingi eyedlula kwaqhamuka insizwa eyayisemkhankasweni wokwakha amahhotela uMnu Sol Kerzner. Wasungula uhlobo lomdlalo wemali lapho kusetshenziswa imishini enhlobonhlobo, ezinqumelayo ukuthi iyikhipha nini imali kuzuze lowo osemdlalweni ngaleso sikhathi. Ngenkathi iseyivela kancane le ndlela yokudlala ngemali, onyakeni we-1970 amaCasino akhiwa ahlanganiswa namahhotela ambalwa ayesezindaweni ezine ezaziyizabelo ngaphansi kukaHulumeni wobandlululo, okwakuyiBophuthatswana, iTranskei, iCiskei kanye naseVenda. Ukungena kwalolu hlobo lwebhizinisi kwakhulisa ukusebenza kwamahhotela anamaCasino.
Ngokuba khona kwalolu hlobo lwemidlalo ngemishini yemali esendaweni ebizwa ngeCasino, kwagcina sekuchuma igama lokugembula, elisuselwa kwelesiNgisi lomdlalo onobungozi. Ngamanye amazwi, umuntu odlala lo mdlalo wemali usuke azi ukuthi imali adlala ngayo inokuba ibuye, izalaniseke kumbe ihambe yonke. Akukho muntu obhekele ukuthi odlalayo usebenzisa imali engakanani kulo mdlalo futhi akukho sinqumo esikhumbuza odlalayo ukuthi useyisebenzise kakhulu noma kancane imali anayo. Yibo-ke ubungozi balo mdlalo, obenza odlalayo alokhu ethembile ukuthi uzogcina ephumelele kwesinye isikhathi ize iphele nya imali, agcine eseboleka kwabanye. Kubanikazi bezindawo ezingamaCasino kuyibhizinisi elingayiwa, lapho abantu bezifakela bona imali emshinini, bangakhali ngamuntu othathe imali yabo uma bengazuzanga ekugcineni. Leli lingelinye lamabhizinisi okuthathe isikhathi ngaphambi kokuba bangene kulo aboHlanga. Leli bhizinisi linemishini eminingi enhlobonhlobo edlalwa ngemali eyahlukene. Umthetho olawula ukugembula iNational Gambling Act washicilelwa ngonyaka wezi-2004. AboHlanga baqala ukungena kulolu hlobo lwebhizinisi kwathi onyakeni wezi-2008 kubuyekezwa umthetho wokugembula kwashicilelwa iNational Gambling Amendment Act. Kusukela onyakeni wezi-2004 kwaqala kwavumbuka amaCasino ezindaweni eziningi, aboHlanga baya ngobuningi abanye bathenga amasheya kumaCasino. Ngonyaka wezi-2019 ekupheleni konyaka wezimali enyangeni uNdasa bekunamaCasino angama-39 eNingizimu Afrika. Iningi laboHlanga ligcina lizanelisa ngakho ukufika lidlale kule mishini, liphume lizihambele liye emakhaya. Abanikazi bamahhotela eSun International yibona abahamba phambili kumaCasino.
Kuze kube manje kudingeka umuntu azifikele mathupha emishinini yaseCasino ukuze adlale agembule. Abanye bathanda ukuba bathi bedlala emshinini babe bebeke isiphuzo bezijabulisa. Ngaleso sikhathi abanikazi bebhizinisi basuke benza imali. Uma ukule ndawo kuzwakala ubukhaxakhaxa kuzwakala imishini ingena iphuma imali. Njengoba kube nemvalelwakhaya kusukela enyangeni uNdasa amaCasino abevalile kungangeni mali.
Umbiko owakhishwa yinkampani iPrice Waterhouse Coopers ngonyaka wezi-2017 waveza amaCasino njengebhizinisi eliwaqwaqwada emakhanda wonke embonini yezokugembula eNingizimu Afrika. Imboni yezokugembula ihlanganisa amabhizinisi okubheja emncintiswaneni wamahhashi agijimayo, iLotto namanye. Ucwaningo nombiko owakhishwa yiPwC ngonyaka wezi-2017 waveza ukuthi amaCasino ewodwa angenisa imali elinganiselwa ezigidigidini ezi-R17 901; kanti onyakeni wezi-2021 kwabukeka ukuthi umthamo wamaCasino uyokuba yizigidigidi ezi-R21 220. Lokhu kuveza ukuthi yinkulu kakhulu ingxenye edlalwa yibhizinisi lamaCasino kuleli lizwe. Uma kuhlanganiswa amabhizinisi angaphansi kwemboni yokugembula ama-72% omthamo wemali engenayo ezweni ivela kumabhizinisi ayiCasino.
Ukhuvethe luthikameze izinhlelo eziningi nakuyo le mboni. Enyangeni kaMandulo okhulumela inkampani iSun International wazise ukuthi kungenzeka badilize izisebenzi ezibalelwa ezi-2 300. Okunye okuhlongozwayo ngukwenza lo mdlalo wokugembula ungabi bukhoma, kodwa kusetshenziswe ubuchwepheshe obusakhompyutha.
Lokhu kungasho ukuncipha kwabantu abangena emaCasino, kube nomthelela ekwehliseni isibalo sabasebenzi. Okwamanje uMnyango Wezohwebo Nezimboni bewungakaluvumeli lolu hlelo. Sizolandela sibike ngokuqhubeka kwesikhathi.
nguLindani Dhlomo Nov 13, 2020